[solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Networking Problems » [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking]
1 [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 14th July 2010, 11:00 am
1-ISP တွေမှာ ဘာဆာဗာတွေရှိလဲ အဲဒီဆာဗာတွေကို ဘယ်လိုတပ်ဆင်ထားလဲ ဘယ်လိုHardware (eg: Hard Disk, RAM, CPU,etc...) ကို သုံးရလဲ
2-ISP တွေမှာထားတဲ့ Software Engineer, Developer စတဲ့ programmer က ဘယ်လိုအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ပါသလဲ
3-နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့တွေ ကျော်ကြခွကြတဲ့ Proxy တွေဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံကဆာဗာ Port ဘယ်လောက်စသဖြင့်ပြောကြပါတယ် အဲဒီမှာ ISP နဲ့ Proxy and Port တွေက ဘယ်လိုပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုအလုပ် လုပ်ကြတယ်ဆိုတာ နားမလည်ပါ
4-ကျွန်တော်တို့တွေ ရဲ့ ISP တွေကနေ သူတို့ရဲ့ Customer တွေအတွက် Internet Bandwidth အများဆုံး 512KB 1MB စသဖြင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ပေးကြပါတယ် ISP တွေ Bandwidth များများပေးနိုင်ဘို့ ဘာတွေလုပ်ကြရလဲ ဘာကြောင့် Bandwidth နဲနဲဘဲပေးနိုင်ရတာလဲ သိချင်ပါတယ်
5-ISP တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ရာကနေ Internet (www-World Wide Web) ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကြားဖူးပါသည် တကယ်လို့ ကိုယ်နိုင်ငံ(မြို့)မှာ ISP တစ်ခု ထူထောင်ချင်ရင် အနီးဆုံး ISP ကနေ ချိတ်ဆက်ပြီး ISP တစ်ခု ထူထောင်လို့ရပါသလား မရရင် ISP တစ်ခု ဘယ်လိုစထူထောင်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ
6-Internet user တွေအတွက် Internet connection တစ်ခု လျှောက်ထားချင်တယ်ဆိုရင် ISP ကနေ connection type ဘယ်နှစ်မျိုးနဲ့ service ပေးနိုင်ပါသလဲ ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ ADSL, Broadband, Dia Up, IP Star, Wifi & Wimax ရယ်လို့ဘဲကြားဖူးပါသည် အခြား connection type များရှိရင် သိချင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ဗဟုသုတနည်းလွန်းလို့ မသိခြင်းအား အားနာစွာနဲ့ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရိုးသားစွာထင်မိပါတယ် နားလည်တတ်ကျွမ်းသော သူငယ်ချင်းညီကိုများ ကူညီပြောပြပေးစေချင်ပါသည်။
2 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 17th July 2010, 1:11 pm
ဖြေဖို့အတွက် Photo Resource တွေရှာရမှာမို့လို့
3 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 17th July 2010, 1:28 pm
အကို ရေ မေးထားလိုက်တာတွေ နဲ့ ရင်မော သွားသလိုပဲ
ဖိုရမ်ထဲက ညီအကို တွေ လည်း ၀ူိင်းဖြေပေးကြပါဦး မေးခွန်းတွေလည်းများတယ်
ပြောပြရမှာတွေ လည်း များတယ် အဲတော့ စာအုပ်ရေးပီးတင်ပေးစေချင်တယ် အကိုတို့ရေ
ညီတို့လည်း မသိတာတွေ ပါ တယ်
အဲတော့ PDF လေး အဖြစ်ရေးပီး တင်ပေးမယ် လူရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ဗျာ
အကိုတို့ရေ ဖြေပေးမယ့် အကိုများအတွက် အလုပ်ဂူပ်သွားတယ် ဆိုရင် တော့
4 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 17th July 2010, 1:55 pm
[You must be registered and logged in to see this image.] သေပြီဆရာ.......
5 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 17th July 2010, 1:57 pm
မသေပါဘူး ကို အသဲကွဲလူသားရယ်
ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 17th July 2010, 10:30 pm
1. ISP တွေမှာ Special Purpose Computer (Router) .. Gateway Server .. RRAS .. Routing and Remote Access Server .. RADIUS .. Remote Authentication Dile In User Server .. Firewall ... DMZ .. DeMeteried Zone (အပြင်က လှမး် ပြီ းသုံး တဲ့ လူ တွေ ကို ၀င်သုံးခွင့် ပေး တဲ့ Server န ဲ့ ကျွန်တော် အခု ဏ က ပြော ပြ တဲ့ Server တွေ ကို ကန့်ပေ းတဲ့ ပစ္စည်း).. DNS .. Domain Name Server .. DHCP .. Dynamic Host Configuration Protocol .. Proxy Server
2 Software သမား တစ်ယောက် မ ဟုတ် တဲ့ အတွက် သိပ် တော့ မ သိဘူး .. ဒါ ပေမယ့် ကျွန်တော် တို ့နိုင်ငံ က တော့ ဝယ်သုံး ဒါ များ မယ် လို့ထင် တယ် .. ISP မှာဆော့ဗ်ဝယ်သမား တွေ ထက် .. System Engineer တွေ .. Network Engineer twe မှာ များ လောက် တယ် ..
3 Proxy ကျော် တယ် ဆို တာ က .. ဥပမာ အလုပ်သမား လို ချင် တာ က နိုင် ငံခြား က လူ.. အဲ ဒါ ပေ မယ့် သူ ကဒီ နိုင်ငံမှာ အလုပ်သမား လာ ရှာ ခွင့် မ ရှိ ဘူး .. အဲ ဒီ့တော့ ဒီ နိုင် ငံ က အေးဂျင့်ကို ရှာ ခိုင်းတဲ့ သဘော မျို းပဲ .. Web Access လုပ် ချင် တာ က ခများ .. ဒါပေ မယ့် ခများ မှာ လုပ် ခွင့် မရှိ ဘူး အဲ ဒီ့Web ကို .. ဆို တော့ တစ်ခြား Web က ဒါ သူ ့ရဲ့Web ပါ ဆို ပြီး.. လိမ် ပြီး.. ဒေါင်းယောင်ဆောင် သော် ကျီ း..သိုးယောင်ဆောင် သော် မြေးခွေးပုံ စံမျိုးနဲ့သူ Access လုပ် ပေး တာ ဖြစ် တယ် .. Proxy Server ဆိုတာ .. သူ ့Local ထဲ က ထွက် တဲ ့ဟာ တွေ အား လုံး က သူ့Proxy & Port က ထွက် မယ် .. အဲ ဒီ့Server တွေမှာ ခများ ပိတ် ထား လို့ရ မယ် .. ပိတ် ချင် တဲ့ site တွေ ကို .. ညစ်ညမ်း site တွေ နဲ့.. နိုင်ငံရေးsite တွေ ပေါ့ဗျာ ဥပမာ ပြော ရ ရင် ..မြန်မာပြည်ကို Local တစ်ခု အနေန ဲ့ မြင်ကြည့်လိုက် ပါ .. အဲ ဒီ ့အချိန်ကျ ရင် .. အခုအသစ်စဉ် ထား တဲ့ .. ဟံသာဝတီ Gateway ကြီးက ကျွန်တော် တို့လိုကယ်ရဲ့ Gateway Computer ဖြစ်သွားလိမ့် မယ် .. အဲ ဒီ့ မှာ Proxy Server ရှိမယ်..ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လဲ မ ရှင်းတာ တစ်ခုရှိတယ်... နိုင်ငံခြားက Proxy ကို တိုက်ရိုက်လှမ်းပြီ း..ဘယ်လို Access လုပ် လဲ ဆို တာ ..
4. ISP က bandwith တွေ ကို တို းပေး ပို ့အတွက် .. သူ နဲ့Local Service Provider (LSP or Telephone Exchange For wired network or Redlink and Myantal For Wireless Network) တွေ မှာ သုံး တဲ့ Interface Card တွေ ကို မြန်နှုန်းမြင့်ပစ္စည်းသုံးရမယ်.. 1E1 သုံးထား ရင် ..2345 E10 လောက် သုံး သင့် တယ်.. အဲ ဒါ တွေ ပြောင်း ပြီ းသွား ရင် .. ကျွန်တော် တို့အိမ် တွေ မှာ Moderm တွေ ရှိ သလို Phone Exchange တွေ မှာ လဲ DSL Card တွေ ရှိပါတယ်.. (နာမည်ခေါ်တာ ကောင်းပါတယ် .. မေ့နေတယ်)
..အဲဒီ့ကဒ်တွေကိုလဲ မြန်နှုန်းမြင့် ပြောင်းကမယ်.. အဲ ဒါ တွေ ပြီ းရင် .. Telephone ကြိုးတွေ ရဲ့Node တွေ ကိုလဲပြင်ရမှာ ဖြစ် ပါ တယ် ..
5. ISP တွေ ကို စု လိုက် ရင် အကိုပြောသလို .. World Wide Web ကြီးဖြစ်မလားပါဘူး .. အကိုပြော ဒဲ ့ဟာ က ISP နဲ ့ရှင်ကြည့်ရင် .. သေးငယ်တဲ့ Web Server လေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် .. ISP တွေ ကို နိုင် ငံ အလိုက် စု လိုက် ရင် .. IX .. Internet Exchange ကြီး ဖြစ် လာပါတယ် .. Remote Phone Exchange တွေကို စုလိုက်ရင် .. Exchange ရုံးကြီးဖြစ် သွား သလို ပေါ့ .. အဲ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ ဆို ရင် တော့ .. IX မရှိသေး ပါ ဘူး .. ဒါ ပေမယ့် ..ဟံသာဝတီ Gateway ကြီးကတော့ .. IX အသေး လေး လို့ပြော လို့ရ ပါ တယ် .. အဲ ဒီ့IX တွေ ကို ချိတ်ဆက်ပြီ းမှ.. File Sharing .. Web Sharing .. Database Sharing တွေ နဲ့Internet ကြီးဆို တာ စတင်လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ် .. ကျွန်တော် ပြော ပြ တာ အလည်း လောက် က ဖြတ် ပြီ းပြော ပြ တာ ပါ .. ISP က ဘာ တွေ စု ပြီ းဖြစ် လာ တာ လဲ ဆို ကို အကို အောက် ဆင် ပြီ းဆက်စဉ်စား လိုက် ရင် .. အင်တာနတ် အလုပ် လုပ် ပုံ က ဒိုးဇတ် ကစားတာ ထက် ကို လွယ် ကြောင်းအကိုသိသွားလိမ့်မယ်.. concept ကို သိသွားပါလိမ့်မယ်
6. Internet Connection2မျို းရှိတယ် .. Broadband နဲ့NarrowBand ဆို ပြီး.. BroadBand မှာ .. ADSL .. Asymatric Digitel Signel line .. E1 T1 line .. IPstar and Wi-Max ဒို ့ပါ ပါ တယ်
Wi-fi ဆို တာ က ISP က ချ ပေး တဲ့ High Speed Broadband ကို ကိုယ့် Organization .. ကိုယ့် မြို့.. ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ .. ကိုယ့်အိမ် .. ကိုယ့် အိပ်ခန်း ထဲ မှ လွင့် တာ ကို ဆို လို တာ ပါ .. Main ISP တွေ က Leased Line Broadband တွေကိုပဲ ပေး ပါ တယ် .. Economic ISP တွေ ကမှာ .. Country Wide Wi-Fi .. Metropolitan Wi-fi တွေကို ထက် ချ ပေး ပါ တယ် .. Broadband မှာ Leased Line ဟုတ် တာ နဲ့မ ဟုတ် တာ ဆို တာ ရှိ သေး တယ် .. MPT ADSL ဆို တာ က မ ဟုတ တဲ့ ထဲ က .. ဘာ လို့လ ဲဆို တော့ .. ကြို့ထဲ့ တာ န ဲ့ ကော်နရှင်မရ ဘူး .. ကြို းထဲ့ တာ န ဲ့ ကော်နရှင် ရ တာ ကို Leased Line လို့ခေါ် တယ် .. အဲADSLတိုင်းလဲ မဟုတ် တဲ့ ထဲ က မ ဟုတ် ဘူး နော် .. အဲ ဒါ က ISP ပေါမူတည်တယ်..
နောက်ပြီ း.. နိုင်ငံလျှို ့ဝှက်ချက် .. စီးပွားရေးလုပ် နေ တဲ့ .. ISP တွေ မှာ .. Cluster System တွေ ဆိုတာ ရှိနေသေး တယ် .. MPT ကို ရန်ကုန်မှာ ပဲ ရှိမယ် လို့တော့ မ ထင် လိုက် နဲ့.. သူ ကို စက္ကန့်နဲ့အများ Clone ရိုက်.. မိတ္တူစွဲ .. Heartbeat Check နေ တဲ့ .. ကျွန်တော်တို့မ သိ တဲ ့နေ ရာ ၄ .. ၅ ခု လောက် မှာ ရှိ နေ လောက် တယ် .. ရန်သူ မျို းငါးပါး ကြောင့် ပဲ ဖြစ် ဖြစ် .. တစ်နည်း နည်း ကြောင့် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. တစ်ခု ပျက်စီ သွား တာ နဲ့နောက်တစ်လုံး က ချက် ချင်း service ပေး တယ် ..
ကယ်ဒါတွေကျွန်တော် သိသလောက် ပေါ့နော် .. အပြည့်အစုံမ ဟုတ် ဘူး .. အပြည့်မ မှန်ဘူး .. ပြင်ပေးကျပါ.. ဖြည့် ပေး ကျ ပါ .. မြည်မာပြည်မာ အဲလိုမေးခွန်းကောင်းကောင်းတွေမေးမယ့်လူ တွေအများကြီးလို နေ တယ် .. ဆရာသင်ပြီ းပြီးသွား တဲ့ စနစ်ကိုပြောက်သင့်ပြီးလို့တင် တယ်
7 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 20th July 2010, 10:31 am
ကို[You must be registered and logged in to see this link.] ကိုကျေးဇူးအတင်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီပို့စ်တင်ပြီး ဘယ်သူများဝင်ပြောမလဲလို့ 15မိနစ်ခြားတစ်ခါလောက်ကြည့်နေတာ အစကနဲနဲတောင် စိတ်အားငယ်မိတယ် အခုလိုသိချင်တာတွေသိသင်းသလောက်သိလိ်ုက်ရတော့ တော်တော်လေးဝမ်းသာသွားတယ်။
World Wide Web ဖြစ်ပေါ်လာပုံ (internet) ကိုအသေးစိတ်ပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျာ ကျွန်တော်သိပ်နားမလည်လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ WEB site တစ်ခုလောက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ service provider တစ်ခုခုကိုအပ်ရတယ်။ သူတို့ရဲ့ server ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Design အတိုင်း Site တစ်ခုလုပ်ပေးတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ Hosting & Domain ၀ယ်ရတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက သူတို့ရဲ့ Server ကို internet မှာ လူအများကြည့်ရှုနိုင်အောင် ဘယ်လိုများလုပ်သလဲလို့ပါ။ ကျွန်တော် IIS & Apache တို့လောက်ကို LAN ထဲမှာ Site တွေ Download ဆွဲပြီး စမ်းသပ်ဖူးတာလောက်ဘဲရှိပါတယ်။ တကယ့် WWW ကိုရောက်အောင်ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတာသိချင်လာမိပါတယ်။ ၀ိုင်းဝန်းဖြေကြားပေးသော အစ်ကိုများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
8 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 20th July 2010, 1:46 pm
ဟုတ်ကဲ့ အကို ကျွန်တော် အတက်နိုင် ဆုံး ဖြေ ပေ ပါမယ့် .. လော်လော် ဆယ် တော့် တစ်မျို းမ ထင် နဲ့နော် .. အိမ်သာ ထဲ က ချက် နေ လို့ညကျ ရင် ဖြေ ပေး ပါ မယ် .. အော် ဟို ဒင် လေ .. ကျေးဇူးတင် ချင် ရင် လေ ... အသည်းပုံး အပေါင်းလေ ကို နှိပ် ပြီ းတင် ပေ ပါ နော် .. ဒါ နဲ့နောင် တော် .. Networking ကိုဘယ် မှာ တွေ တက် ဘူး လဲ မ သိ ???စပ်စု တာ ကွီကွီ
9 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 20th July 2010, 4:03 pm
ကျွန်တော် NE ကို ဆရာဦးမျိုးအောင်လတ်ဆီမှာ (ICT) တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ HE ကိုလဲ ဆရာ့ဆီမှာဘဲတက်ခဲ့တာပါ။ ၀ါသနာပါလွန်းလို့ သင်ထားပေမယ့် စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့ အခြားအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေပါတယ်။ အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိတော့ ဒီလိုဘဲ ကိုယ့်ထက်သိတဲ့သူတွေဆီကနေ သင်ယူနေတာပါ။ အသိတွေက အကူအညီတောင်းရင်တော့ အားရင်အလကားမတ်တင်းနဲ့ လိုက်လုပ်ပေးနေတတယ် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]။
10 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 21st July 2010, 12:05 am
umm ..အကိုမေးတဲ့ မေ းခွန် တွေ အရ အကို ICT ကဆိုတာ သိလိုက် လို့မေး လိုက် တာ ပါ .. လေးစား တယ် ဗျာ ဆရာမျိုးကိုအရမ်းပဲ ... သူ လို လူ ရှား တယ် .. သူ ပို့ချ သလို ပို ့ချ တဲ့ သင်တန်းလဲ မတွေ့ဘူး ဖူး ..သင်တန်းတက် ဖို့မလို ဘာ ဘူး .. ဆရာ့ စကား တစ်ခွန်းရှိတယ် .. စာဖတ် ပါ တဲ့ .. အကို အလို မေး တာ သင်တန်းတက် တာ ထက် ကောင် းတယ် .. ကဲ စကားလဲ ရှည် နေ ပြီး.. အကို သိချင် တာ လေ တွေ ကျွန်တော် ဖြေ ကြည့် မယ် .. မှားရင်လဲ ဝင်ပြင်ပေး ကျ ပေါ့ .. အော် အကို ဆရာ့တပည့် ဟောင်း လား မသိ ဝူး.. ဆရာ CCNA ကိုတစ်ပတ် ကို လက်တွေ ့၁ရက် စာ တွေ ့၁ ရက် အလကား သင် ပေးနေတယ် ... ဟီးးးး အကို တက် ချင် ရင် ကျွန်တော် ကို PM န ဲ့ ဆက်သွယ် လိုက် ပါ
11 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 21st July 2010, 12:27 am
နောင် တော် မေး တဲ့ World Wide Web (War Women & Wisky ) နဲ့Internet ဆိုတာ မ တူ ဘူး ထင် တယ် နော် .. World Wide Web ဆို တာ က အင်တာနတ် ရဲ့Function တွေ အများ ကြီး ထဲ က တစ်ခု လို့တင် တယ် .. FTP ဒို့.. VOIP တို့လိုမျို းပေါ့ ဗျာ .. Internet ဆိုတာ က .. LAN တွေ ကို စု တဲ့ အခါ .. Local Service Provider (LSP) ..LSP တွေ ကို စု တဲ့ အခါ .. Internet Service Provider (ISP).. ISP တွေကိုစုတဲ့ အခါ Internet Exchange (IX) .. အဲလိုမျိုး .. IX တွေ ကမ္ဘာပေါ် မှာ အများကြီး ရှိပါတယ်.. ရှိတဲ့ ဟာ တွေ ကို တစ်ခု နဲ့တစ်ခု .. via stellite ..or..Fiber Cable တွေနဲ ့ချိတ် ဆက် တဲ့ အခါ အင်တာ နတ် ဖြစ် ပေါ် လာ တာ ပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော် ပြော နေ ကျ စကား လို ပေါ့ဗျာ .. Local တစ်ခု လို မြင်ကြည့်လိုက် ပါ .. အရမး်ကိုရိုးရှင် ပါ တယ် .. ဟုတ်ကဲ့ အကို မေးတဲ့ နောက် တစ်ခု က ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံမှာ တော့ .. Web Site တင် ချင်ရင် ISP ကို သွား ပေး ရတယ် .. ဒါ ပေမယ့် နိုင်ငံခြား မှာ တော့ .. သူ တို ့ရဲ့Provider တွေ Better Service ပေး တဲ့ အနေ နဲ့.. ကို က ပေး စရာမလို ဘူး .. ကိုယ့်ရုံမှာ ပဲ Proxy Server တွေ DNS server IIS .. aparche တွေ ပေး စဉ် ပါ တယ် .. Economic View န ဲ့ မ ကြည့် ဘဲ နဲ့.. Netwroking View နဲ့ကြည့်ရင် ISP အသေး လေးတစ်ခု လုပ် ပေး လိုက် သလို ပါ ပဲ .. Web တွေ ကို ဘယ် လို ကြည့်လို ့ရ သလဲ ဆို တာ ကတော့ ဒီ လို ဗျာ ..IX တွေ ကို ကျွန်ပျူတာ တွေ လို့မြင် လိုက် ပါ .. အဲ ဒါ တွေ အား လုံ းချိတ် ဆက် ထား တာ ကို Local လို့မြင် လိုက် ပါ .. Local ၁ ခု မှာ .. ကိုယ်share ပေး ထား ရင် နောက် ဆက် တစ်ဆက် က ယူ ကြည့်လို ့ရ သလို မျို းပေါ့ .. Local မှာ က Addressing က အဲ လောက် အရေးမပါဘူး .. ဒါပေ မယ့် .. IX တို့ISP တို ့မှာ ကြ တော့ .. Addressing တွေ က အဒီ့က ပဲ ..Subscriber တွေ ကို တော့ Private Address တွေ နဲ့.. Dynamic ချ ပေး တာ များ တယ် .. ဒါ ပေ မယ့် သူ တို ့အထဲ က super computer တွေ နဲ ့လုပ် ထား တဲ့ server တွေ ကို ကျ တော့ .. Globle Address ပေး ရ တယ် .. အဲ ဒါ မှ တစ်ကမ္ဘာ လုံး က ဝင် ပြိ းAccess လုပ် လို့ရမှာ ဗျ.. အကို အသေး စိတ် သိချင် ရင် တော့ ..IP တွေ ထွက် တဲ့ ဝင်တဲ့ အချိန် တွေ မှာ .. ပြောင်းသွားတာ တွေ .. IP tunneling တွေကို လေ့ လာ ပါ .. အကို သဘော ပေါက် ပါ လိမ့် မယ်
12 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 21st July 2010, 12:39 am
ဘယ်လို မျိုးWWW ကို ရောက်အောင် သွား လဲ ဆို တော့ .. ဥပမာဗျာ .. အကိုရဲ့ISP က အကို့ ကို Private Address 203.81.167.206 လို့ပေး ထား တယ် ဆို ပါ ဆို့.. အကို က Google ကို ခေါ် လိုက် တယ် .. Google ဆို တဲ့ name နဲ့အလုပ် လုပ် သွား တာ မ ဟုတ် ဘူး .. သူ ့ရဲ့IP Address 64.233.160.0 က အလုပ် လုပ် သွား တာ .. ဒါ ပေမယ့် .. Google ရဲ့ server ကို အကို ရဲ့Private Address နဲ့access လုပ် သွာ းတာ မ ဟုတ် ဘူး .. ကို Private Address က ကိုယ့် ISP ရှိ ရောက် တာ နဲ့.. Globle Address တစ်ခု က ငုံလိုက် တယ် .. source address မှာ အကိုယ့်ရဲ့Privte Address 203.81.167.206 က နဲ့ISP က ဝယ်ထား တဲ့ IP Address နဲ့ထွက် သွား တယ် .. ကိုယ် လို ချင် တာ ရ လို့. .ကိုယ့် ISP ရှိ ပြန် ရောက် လာ တာ နဲ့.. Destination မှာ ကိုယ့် Private Address 203.81.167.206 ပြန် ဖြစ် သွား တယ် .. ကဲ ဒါ က တော့ .. ကျွန်တော် TCP/IP ကို ရက် အနည်း ငယ် လေ့ လာ ဘူး တယ် .. သိ သလောက် share တာ ပို သိ တဲ့ ကို ကို တွေ လဲ ပြော ပြ ကျ အုံး ..
13 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 21st July 2010, 3:32 pm
ကိုheamatitecross ဆရာမျိုးရဲ့ CCNA သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ PM မပို့တတ်လို့ အစ်ကို့ဆီကို PM ဘယ်လိုပို့ရလဲ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] အလကားရလို့သွားတက်ချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး NE တက်တုန်းကတောင် သင်တန်းကြေး သုံးရစ်ခွဲသွင်းရတာဆိုတော့ CCNA တက်ဘို့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ငြိမ်နေရတဲ့အချိန် အစ်ကို့ဆီကသတင်းကိုကြားတော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားမိလို့ပါ။ အစ်ကိုပြောပြတာတွေ နားလည်တဲ့ဟာတွေတော့နာလည်ပါတယ် တချို့ဟာတွေကိုတော့ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံ စာဖတ်အားနည်းတာတွေကြောင့် လိုက်လို့မမှီသေးဘူးဗျ။ နားလည်အောင် အချိန်ယူလေ့လာရင်း ဖတ်သွားပါ့မယ်။ အခုလို ကူညီပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
14 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 21st July 2010, 5:26 pm
ဒါပေမယ့် အချိန်မရလို့ ကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်သလို။
ဖြစ်နိုင်ရင် Network Tier တွေအကြောင်းကိုပါ တလက်စတည်း
ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။ အဲဒါမှ ISP တွေအကြောင်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော့် [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking] on 21st July 2010, 10:24 pm
အဟီ း.. နာ လည် းတယ် ဆို တော့ ဝမ်းသား ပါ တယ် .. နာမလည်း ဘူး ဆို တော့ .. အကို ့ကို ဝမ်း မနည်း စေ ချင် ဘူး .. ကျွန်တော် က dialouge လုပ် တာ သောက် သုံး မကျ လို့ပါ .. ကျွန်တော် တင် ပေ းတယ့် ပို ့စ်တွေ ကို နားလည်း သူ တစ်ယောက် လောက် ကောင် ကောင် မွန် မွန် ပြန် ပြင်ရေးပေး နိုင် ရင် အစဉ် ပြေ သွား ပါ လိမ့် မယ် .. ဆရာ က CCNA ကို အင်္ဂါ ..ကြာသာပတေး .. ၂ ရက် ကို lacture သင် တယ် .. မေတ္တာရပ်ခံ ချင် တာ က တစ်ရက် ပဲ တက် ပါ .. ၂ တန် းခွဲ ထား တာပါ .. ကိုယ် က ၂ ချိန် လုံ းတက်လိုက် ရင် နောက် လူ တွေ ဒုက္ခ ရောက်မယ် .. စာ မရှင် းတဲ့ အပတ် ဆို ရင် တော့ တစ်မျိုးပေါ့ နော် .. အကို တက် ချင် ရင် နောက် တစ်ပတ် ကျော် လောက် မှ လာ ခဲ့ ပါ .. လော လော ဆယ် ဆရာ နိုင် ငံ အပြင် ရောက် နေ လို့ပါ .. လက် တွေ့ကတော့ .. တစ် ပတ် ကို ရ ရက် ရှိ တယ်
ကို အာ မယ့် ရက် လာ တက် ပါ .. ဒါ နဲ့.. CCNA Pratical မှာ cable မ ပြော နဲ့.. စက်တွေ ကို တောင် မြောက်ချင် တိုင် းမြောက် .. ပစ် ချင် တိုင် းပစ် လို ့ရ တယ့် သင် တန်း တွေ့ဘူး လား (တင်စားပြီ းပြော ဒါ နော်) ...ကိုအကွဲ သဲ လူ သား ရေး ခေါင်းစဉ်နဲ ့စာနဲ့သိပ် မ တွဲ မိ လို့.. အစပြို ပေး ပါ .. နောက် ပိုင်းသိ သောက် ရွီးပေ းပါ မယ် ...
16 Re: [solved]ISP အကြောင်း သိပ်နားမလည်လို့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကူညီကြပါ [Networking]